गएराति र आज बिहान ८ को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/गएराति र आज बिहान ८ को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु !
गएराति र आज बिहान ८ को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु !
काठमाडौं । को’रोना सं’क्रमणबाट गएराति र आज बिहान गरी देशभर थप ८ जनाको मृ’त्यु भएको छ । बिहान ११ः ३० बजेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार चितवानमा ४, पर्सामा ३ र धरानमा १ जना सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको हो।
भरतपुर महानगरपालिका–११ का ६५ वर्षीय पुरूष र भरतपुर महानगरपालिका–११ की १८ वर्षीया युवतीको गएराति मृ’त्यु भएको छ। त्यसैगरी गएराति नै चितवनकै खैरहनी नगरपालिका–१३ की ५५ वर्षीया महिलाको मृ’त्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ का ५८ वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान करिब ३ बजेतिर मत्यु भएको हो।
वीरगन्जको गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल उपचाररत पुरुषको मृ’त्यु भएको छ । बाराको कोल्हबीका ६० वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान ४ः५० बजे मृ’त्यु भएको हो। वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड अस्पतालमा वीरगन्ज–२० ५३ वर्षीय पुरुषको मृ’त्यु भएको छ। साउन ३१ बाट अस्पतालको आइसीयूमा उपचाररत उनको मंगलबार बिहान १ बजे मृ’त्यु भएको हो।
वीरगन्जमै बेवारिशे अवस्थामा भेटिएका बिरामीमा मृ’त्युपछि कोरोना पुष्टि भएको छ । भदौ १३ गते उद्धार गरी नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। करिब ६० वर्षका रहेका उनको सोमबार मृत्यु भएको थियो । मृ’त्युपछि स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा को’रोना सं’क्रमण देखिएको हो।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको छ । सिराहा मिरचैया नगरपालिका–६ का ६५ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा सोमबार राति मृ’त्यु भएको हो । health pati